TOAMASINA RENIVOHITRA : Misy Sefo Fokontany miray tendro amin’ ny halatra herinaratry ny Jirama
Na ny hain-trano mitranga na ny fahatapahana tampoka amin’ny herinaratra dia mahazo fanakianana hatrany ny jirama. 23 mai 2017
Efa nisy ihany ny fanazavana noentin’ny tompon’andraikitra ambony teo anivon’ny Jirama, tamin’ity gazety ity, herinandro vitsy lasa, fa ireny halatra jiro ireny no anisany tena mahatonga ny loza mitranga na fahatapahan-jiro tampoka.
Tsy mahazaka intsony ny herinaratra, ka miteraka ny loza na fahatapahan-jiro izany. Efa nisy ihany ny fanentanana natao tamin’izany fa saingy, tsy tahotra, tsy henatra ny an’ity Sefo Fokontany iray ity fa miray tendro sy manaiky ny halatra jiron’ny Jirama. Avy amin’ny tokantrano iray tsy lavitra ny trano fonenan’ity Sefo Fokontany ity no akana ny jiro, ka ity Sefo Fokontany ity mihitsy no namela malalaka ny taniny nohadiana handalovan’ny tariby kely mitondra ny herinaratra ao ambany tany.
Ny baraingo mipetraka dia ny hoe : “olona akaiky an’ity Sefo Fokontany ity ve no mipetraka amin’ny trano hitarihana ny herinaratra sa mety nahazo vola ka mangina sy manome malalaka ny taniny handalovan’izany tariby izany ?”. Mitatao loza, araka izany, ny Fokontany iadidiany, raha sanatria mitranga tokoa ny loza, toy ny hain-trano mety haterak’izao halatra herinaratra izao.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2434) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (912) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (213) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (114) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (110) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (97) 2 mars 2021